Gaaffilee Waraqaa bittaa (voucher) Yeroo hatattamaa Irradeddeebiidhaan Gaafataman
Sagantaan Waraqaa Bittaa Hatattamaa akkamitti gargaaramaa? Gaaffilee Irradeddeebiidhaan Gaafataman
Sagantaan Waraqaa Bittaa Hatattamaa akkamitti gargaaramaa?
Sababa maallaqa murtaa’aatiif, sagantaan nagaheen giroosarii balaa tasaa abbootii warraa ulaagaa guutanii fi galaniif yoo baay’ate yeroo ji’oota torbaatiif ni jira. Ebla 30, 2021 itti fudhattoonni hundi waytii bu’aa isaanii kan xumurtan yemmuu ta’u qarshiin sagantichaaf jiru hundi raabsameera.
Bitootesa yookiin Ebla kaardii koo keessatti $180 argadheera – bu’aawwan kaardicharra jiru yeroo itti ni dabarti? ?
Lakki, qarshiin kaardicharra jiru yeroon itti hin dabartru? Kaardiin kuni yeroon tajaajila isa hin darbu garuu, kaardii bade yookiin hatame bakka buusu hin dandeenyu. Qabxiilee furtuu waa’e kaardii keessanii:
Kaardiin kuni si’aawee tajaajilaaf kana qophaa’ee dha
Kaardiin kun suuqilee Safeway fi Albertsons itti nyaata kamiyyuu, mi’a maatii fi dhuunfaa akkasumas boba’aa Safeway bituuf ni fayyada.
The card allows for the purchase of mi’aale nyaata, mi’aale maatii, and mi’aale dhunfaa.
Kaardiin kuni qarshii yookin gatii dhatti hin deebifamuu.
Kaardiin kun alkoolii, tamboo, tikeetii lotarii fi kaardii kennaa kanneen biroo bituuf HIN hayyamu. Kaardichi battalimatti ajajarratti oomishoota hayyamamuu fi hin hayyamamne adan baasa akkasumas meeshaalee kanneenirratti akka kaffalamuu hin hayyama.
Maloota kaffaltii raawwii baasii tokkoo keessatti makuu ni dandeessuu.
Saganticharratti galmaa’eera garuu, waraqaalee Bittaa/kaardiiwwan naaf ergame mara hin argannee.
Kaardiin kuni yeroon tajaajila isa hin darbu garuu, kaardii bade yookiin hatame bakka buusu hin dandeenyu.
Waraqaaleen bittaa/kaardiiwwan gara iimeelii USPS sadarkaa toffaatti eergamuudhaan gitaa fi fudhattoota galmaa’anif iimeelii ittiin galmaa’an yookiin yoo kan kennan ta’e iimeelii fooyya’aa irratti ergameera. Raabsiin kaardiiwwan $180 kan dhumaa Bitootesa 25, 2021 irratti ergame. Ebla guutuu, kaardiileen kamiyyuu kan gara Magaala deebifaman akka hin imeeliin hin gahiinitti fudhanneera akkasumas akkataa imaammata deebii keenyaatiin yaalii hund irra-deebiin erguuf goneerra. Ebla 30, 2021 booda kaardiiwwan hin hojjennuu yookiin irra-deebiin hin erginu.
Bitooteesa 2021 keessa, qarqabaa deeggarsa fedeeraalaa kan COVID-19 darbee ture. Kana jechuu Sagantaan Waraqaa Bittaa Hatattamaa kab biroo ni jiraata jechuu dha?
Qarqabni deeggarsaa COVID-19 kan dhihoo kana (Karoora Baraarsaa Ameerikaanootaa), wajjira kantiibaati fi Waajjira Baajata Magaalaa hojjattoota Mana Marii Waaltaa wajjiin, Waajjira Pireezdaantii, fi Wajjira Dura taa’aa Faynaansii caalmayaa investimeentii biyyaa dursa kennuu dhaaf jecha gamtaan wajjii hojjechaa jiran. Xiinxalaa Baajata Magaalaati fi Waajjirri Walitti dhufeenya-mootummootaa gosoota deeggarsa federaala kan akkamii akka jiru, deeggarsaaf gahaa wanti tahee maal akka ta’e, eenyuu akka deeggarsa kanaaf gitaa akka ta’ee fi hir’inoonni guddaan namoota tajaajilamanii keessaa essa akka jiru keeddebiin ilaala jiran. Fedhii gargaarsa itti-fufaa kan akka Waraqaa Bittaa Hatattamaa akka jiru ni beekna akkasumas fedhiiwwan kan guutuun dursa waahiloota hawaasaa tii fi jiraattootaa ti. Waytii nuti dursa inveestimeentii tahuu qabu hanga addan baasnutti hojjattonni Magaalaa kana ilaalcha keessa galchaa turan
Amma gargaarsa nyaataatin barbaada – qabeenya maaltu jira?
This COVID-19: Maaloo daawwadhaa www.seattle.gov/covid-19 odeeffanmnoo fi walitti hidhanan weebii magaalaa Seattle, King County, Kutaa biyya Washington, federala, fi sagantaalee fi tajaajilawwan ummataa kan jiraattota weerrara dhibee COVID-19 tiin baay’ee miidhaman gargaaruutiif. Sagantaaleen nyaatatii fi tajaajiloonni muraasni:
Washington Connection maatii dhaa fi dhuunfaa dhaaf tajaajiloota akka Nyaataa, Kunuunsa Daa’immanii, Kunuunsa yeroo dheera ti fi Sagantaawwan Qusannaa Fayyaa faa dhaa akka iyyataniif kaaraa ariiti fi salphaa ni kennuu. Odeeffannoon dabalataa as jira.
Kartaa haasoo fi tarreeffama baankiiwwan nyaataa, buufatoota nyaataa, fi nyaataa baraattoota kan deemaniin. Qabeenya qorachuufAs tuqaa to explore the.
Laqana bilisaatii fi gatiin isaa hir’ate Manneen barnootaa Hawaasaa Seattle irraa Dabalattan baraati asitti iyyata galfadha
Ebla 2021 itti maatiiwwanii fi barattoonni Laqana bilisaatii fi gatiin isaa hir’ateef Manneen barnootaa Hawaasaa Seattle itti galmaa’an bu’aa Pandemic EBT (P-EBT) jedhamu argachu ni jalqaban. Marsariitii Manneen barnootaa Hawaasaa Seattle irraa dabalattan baraa yookiin Waalataa Qunnamtii P-EBT kana 1 (833) 518-0282 irratti bilbiluun (Turjumaanni ni argama).
Ga’eessota High Poit, New Holly fi qabeenya Mannee-jireenyaa Taayitaa Rainier Vista Seattle jiraataniif Nyaanni bilisa Ga’eesotaa manattii kan geeffamaaf. Nyaata manattii namaaf geeffamuu gaafachuuf Unka kana onlayiniidhaan guutaa yookiinn kana (503) 395-7697 bilbilaa.
Sagantaawwan nyaataa kan nama guddaa (umrii 60+) fi Meal-on-Wheels(nyaata-goommaawwaniirraa). Seattle fi King County keessatti tajaajilatti hidhamuudhaaf Walitti hidhata Jireenya Hawaasaa kana 1 (844) 348-5464 (bilbila bilisaa) irratti qunnamaa.
Sagantaa Dhihaanaa Hatattamaa namoota hir’ina nyaataa qabaniif nyaata korojoolee keessatti dursee qarqabame ni kenna. Akkasumas namoota umriin isaanii waggaa 55 yookii san ol ta’aniif sagantaa itti fudhata kan drive-thru dha qaban. Odeeffannoon dabalataan as jira.
Fakkenyaaf Yuunaaytid Weey Of Kiing Kaawontiinsaanduuqa yeroo hatattamaa KOOVID-19 mana manarra deemsisuuf fedha agarsiisaniiru. Tajaaljiloonni kuni warreen qaamaan bankii nyaataa naannoo isaanii irgachuu hin dandeenye fi mi’a bitachuu hin dandeenyeefi. Sanduuqa nyaataa gaafachuuf, unka onlaayinii kana guuta.
Kaaba dhihaa Gabaa Hawaasa Harvest SODO is offering pre-bagged produce, prepared foods, and shelf-stable groceries right at the door oomisha dursee korojootti naqamee, nyaata qophaa’ee, fi mi’a sanduuqa-mi’aa hulaa teessan irratti isiniif geessa. Gara dhaabbataa seenuun hin barbaachisu. Kuni nama kamiyyuu kan UMRII HUNDAA tiif banaadha. Gabaa Hawaasa SODO dhaa ollaa Seattle SODO 1915 4th Ave S, near the corner of 4th Ave S fi S Holgate St dhaatti argamti.
Gamtaan naannoo keessanii kan South King County fi Gareen Deegarsa Waliinii Eastside COVID-19 kan Vayrasii Koroonaa naannoo warreen “midhama, shukkubsatanii fi hir’ina qaamaa qaban, humna ittisa dhukkubaa gadi-aanaa qaban, sanada-maleeyyii, gurraacha, queer, kan dhalootaa, fi yookiin kan namoota halluu” tahaaniif mi’a geessaaf. Fuulli gaaffii asitti argama.
Tajaajiloota armaan olitti tarreefaman dabalataan COVID-19 irraa baracguu ni dandeessan: Qabeenya Hawaasaa. Gaaffiileef, maalo Wiixata irra hanaga Jimaataa sa’aatii 8:30 AM – 5:00 PM kana irratti (206) 684-2489 yookiin (206) 684-CITY Waajjira Tajaajila Maammiltoota kan Magaala Seattle dhaaf bilbilaa.